Tuesday October 25, 2016 - 16:53:56 in Wararka by Super Admin
Ku dhawaad 60 Askari ayaa dhintay kadib markii rag hubeysan ay weerar ku qaadeen Xarun Booliiska lagu tababaro oo ku taalla Dalka Pakistan.
Wararka ka imaanaya dalka Pakistan ayaa sheegaya inay dhinteen 58 Askari oo Booliis ah, ayna dhaawacmeen 130 kale oo qaarkood xaaladoodu ay aad u liidato markii rag hubeysan ay weerar culus ku qaadeen Xarun Ciidamada lagu tababaro oo ku taalla magaalada Kuwiita ee Gobolka Buluushistaan.
Saraakiil Dowladda Pakistan ka tirsan ayaa sheegay in Shan nin oo aad hubeysnaa oo qaarkood xirnaa Jaakado ay ku jiraan Walxaha Qarxa in xilli dambe oo habeenkii xalay ahaa inay gudaha u galeen Xarun lagu tabarayay 200 oo Booliis ah, ka hor inta aysan toogasho ku dilin Ciidamadii ilaalada ka ahaa Saldhigga.
Sida ay wararku sheegayaan, iska hor imaad culus oo socday inkabadan Shan Saacadood oo xiriir ah ayaa dhex maray Ciidamada Booliiska ee dalka Pakistan iyo Kooxaha hubeysan ee weerarka soo qaaday, waxaana dagaalka ka qeyb qaadanayay diyaaradaha Helicopters-ka ee ay leeyihiin Ciidamada Meliteriga.
Weerarkan ayaa noqonaya kii ugu khasaaraha badnaa ee soo mara dalka Pakistan labadii bilood ee lasoo dhaafay, iyadoo bishii August uu dalkaasi ka dhacay weerar uu fuliyay qof soo xirtay Suun ay ka baxaan Walxaha qarxa, kaasi oo beegsaday goob ay ka socotay Xaflad loogu baroor diiqayay Nin Qareen ahaa oo la toogtay, waxaana Qaraxaasi oo ka dhacay meel ku dhow Isbitaalka magaalada Kuwiita ku dhintay 70 ruux oo badankood ahaa Garsoorayaal, Qareenno iyo Wariyeyaal.
Illaa iyo hadda ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay Mas’uuliyadda howl-galkii khasaaraha badan dhaliyay ee xalay lagu qaaday Xerada lagu tababayay Askarta Booliiska ee magaalada Kuwiita ee Waqooyi galbeed dalka Pakistan, balse Saraakiisha Ammaanka ee dalkaas ayaa weerarkaas ku eedeeyay Kooxda lagu magacaabo Caskar Janjawi ee ku dhow Xarakada Daalibaanka Pakistan.